Ny fiteny hamitô-semitika, izay atao hoe koa fiteny afrô-aziatika, dia fianakaviam-piteny tenenina indrindra ao Afrika Avaratra, ao amin'ny Tandrok'i Afrika, ao Atsinanana Afovoany, ao amin'ny faritr'i Sahara ary ao amin'ny ampahany amin'ny faritr'i Sahely. Miisa 350 any ho any ny fiteny ao amin'io fianakaviam-piteny io ary miisa 410.000.000 ny mpiteny azy. Fahefatra io fianakaviam-piteny io raha ny isan'ny mpiteny no heverina, ka ny eo alohany araka ny filaharany avy dia ireo fiteny indo-eoropeana, ireo fiteny sino-tibetana ary ireo fiteny nizero-kongoley.
Ny fiteny afro-aziatika be mpiteny indrindra dia ny fiteny arabo. Izy ihany koa no be mpiteny indrindra ao amin'ireo fiteny semitika, izay lasa aloha lavitra an'ireo fiteny amharika izay laharana faharoa amin'ny fiteny semitika be mpiteny.
Ankoatr'ireo fiteny mbola misy mpiteny ankehitriny dia maro ireo fiteny be mpiteny tamin'ny Andro Taloha ao amin'ny fianakaviam-piteny hamito-semitika, dia ny fiteny egiptiana tranainy sy ny fiteny akadiana ary ny fiteny gezy.
1.1 Fianakaviam-piteny ao Afrika:
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_hamitô-semitika&oldid=995698"
Dernière modification le 31 Jolay 2020, à 15:51
Voaova farany tamin'ny 31 Jolay 2020 amin'ny 15:51 ity pejy ity.